Periscope ၏ဖက်ရှင်အက်ပလီကေးရှင်း၏ဆိုးကျိုးများ၊ Androidsis
Periscope ကိုသိပြီးအသုံးပြုခြင်း၊ ခေတ်မှီသော real-time streaming ၀ န်ဆောင်မှု
Manuel Ramirez | | Android application များ, လွှ, လဲ tutorial
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကလူသိများပါတယ်အဘယျသို့ကနေ Periscope အသုံးပြုသူများနှင့်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်နေသည်, အခုအခုအတော်လေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့။ တွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ် Instagram တို့သည်ထိုအချိန်ကကဲ့သို့ပင်။ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသောကမ္ဘာသို့ပို့ဆောင်ပေးသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှတစ်ခု။ တိုက်ရိုက်ဂိမ်းဆိုတာဘာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ရပ်တန့်သွားတဲ့သူစိမ်းတွေနဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာဖြစ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အိုင်ဘီဘာကမ်းခြေတစ်ခွင်ကနေတီးမှုတ်သံတွေကြားမှာလား Periscope ၎င်းသည် stardom သို့တိုက်ရိုက်လွှင့်တင်သောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုသူ့ရဲ့ nook နှင့် crannies တစ်ခုစီကိုသိစေချင်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီနှင့်ဤလျှောက်လွှာ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်တင်ပြသည် အရာကောင်းစွာဤအရပ်မှ, Twitter ကဘာလဲဆိုတာနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ဒီအားဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည် တူညီတဲ့ကုမ္ပဏီ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ Periscope သိုလှောင်ထားရာကိုသွားကြကုန်အံ့။
1 ဒါပေမယ့် Periscope ကဘာလဲ?
2 Periscope အခြေခံ
ဒါပေမယ့် Periscope ကဘာလဲ?
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် Periscope အကြောင်းပါ ဗွီဒီယိုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ရန်ကူညီပေးသော app တစ်ခု။ ၎င်းသည်၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ဗဟိုဝင်ရိုးတစ်ခုစီ၏အဓိကဒြပ်စင်တစ်ခုချင်းစီကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောအရာဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုကိုစတင်သောအခါ၎င်းတို့သည်ပရိသတ်များ၊ နောက်လိုက်များနှင့်အတူရှိသည့်ဗီဒီယို၊ အသံနှင့်နေရာကိုမျှဝေသည်။ တည်နေရာကိုပြုပြင်နိုင်သည် ဆန္ဒရှိလျှင်ကပိတ်ထားရန်။
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေသူများကိုကြည့်ရှုနေသူ ၎င်းတို့သည်အချိန်နှင့်အမျှမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ဤအရာများသည် Periscope ၏ "I like you" မျိုးဖြစ်သည်။ တွစ်တာကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တွစ်တာမှမျှဝေထားသောလင့်ခ်များမှစီးဆင်းမှုများကိုပြန်ထုတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter အကောင့်နှင့်ဝင်ရောက်ပါဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည့်နောက်၊ သို့မဟုတ်အက်ပ်ရှိဖုန်းနံပါတ်နှင့်ပင်လျှင်။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တွစ်တာတွင်ရှိသည့်အသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်သို့သွားရန်ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းပြီးပြီဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ငါတို့သွားမယ် ပစ္စည်းဒီဇိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်သောအဓိကမျက်နှာပြင် Periscope ၏အရေးပါသောအမျိုးအစားသုံးခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောထိပ်ဆုံးရှိအဓိက icon သုံးခုနှင့်အတူ။ ဘယ်ဘက်ရှိပထမတစ်ခုမှာသင်လိုက်လံအသုံးပြုသူများမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် live stream များကိုရယူရန်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဂြိုဟ်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အတူ, ငါတို့ကိုယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသို့မဟုတ်စီးများ၏ရှေ့မှောက်၌ကျွန်တော်တို့ကိုနေရာချ; နှင့်အသုံးပြုသူများကိုအကြံပြုလိမ့်မည်ဟုအဘို့အညာဘက်အပေါ်တ ဦး တည်း။ သင်သည်ဤနောက်ဆုံး tab ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၊ ညာဘက်ရှိ icon မှသင်၏ပရိုဖိုင်းသို့သွားနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ရှိသည်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင် အများသုံးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကလွှင့်မှုကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အား ဦး ဆောင်သောရေပေါ် FAB ခလုတ်။ သီးသန့်လွှင့်ထုတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သောအခါသင်နောက်လိုက်များနှင့်တာဝန်ပေးထားသူများသာလျှင်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် streaming များကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးပြီးရွေးချယ်စရာသုံးခုကိုသွားသည်။ ပထမနေရာသည်မျှဝေခြင်း၊ ဒုတိယသူသည်မည်သူစကားပြောနိုင်သည်ကိုတတိယနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ streaming ကိုတွစ်တာသို့သွားလိုခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
အခုအချိန်မှာ streaming ပုံတူနှင့်အတူအကျင့်ကိုကျင့်ဒါကြောင့်ရှုခင်းကအသစ်တစ်ခုကိုစောင့်နေရမှာပါ။ Terminal တွင်ရှိသည့်ကင်မရာနှစ်လုံးထဲကတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်သင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အရည်အသွေးကြောင့်ရှေ့မျက်နှာစာသည်နည်းနည်းပင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်ရှိသည့်ဖုန်းပေါ်မူတည်သည်။
အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုကတော့သင် streaming လုပ်နေစဉ်၊ ဗီဒီယိုဖွင့်တဲ့သူတွေက ၁-၂ စက္ကန့်လောက်နောက်ကျလိမ့်မယ်။ Streaming ကိုအဆုံးသတ်လိုသည်နှင့်တပြိုင်နက်အောက်သို့ပွတ်ဆွဲပြီးနိဂုံးချုပ်ပါ။
ဒီနေရာမှာ Periscope ၏အသွင်သဏ္ဌာန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွှင့်ထုတ်မှုကိုသင်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ၊ စာရင်းအင်းများကိုသင်တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။ retention rate, စုစုပေါင်းကြည့်ရှု, စုစုပေါင်းကြည့်ရှုအချိန် နှင့်ကြာချိန်ချက်ချင်းသင်တို့ရှေ့မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်သိရန်အရေးကြီးသည် Periscope သည် ၂၄ နာရီလုံးလုံးစီးစေသည်အဲဒီအချိန်ကသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ငါတို့ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုထင်ကြစို့ Snapchat မျိုး တိုက်ရိုက်နှင့်တိုက်ရိုက် streaming များ၏။ ငါတို့ရှေ့မှာဖြစ်ပျက်သောနှင့်ငါတို့ရှေ့မှာမရှိတော့ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ပင်တစ်ခုခု, ဤအရပ်မှ Periscope ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာနေသည်။
၎င်းသည် Periscope အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည် "ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကမ္ဘာကြီးကိုတခြားသူတွေမြင်စေပါ"။ ဤလျှောက်လွှာ၏အဓိကနှင့်ဆောင်ပုဒ်နှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ခံလေ့လာမှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေသည်။ ဤအရာများသည် ၂၄ နာရီမျှကြာလိမ့်မည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်သူမည်သူမဆိုပုံတူကူးယူနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်နီးကပ်စွာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူ အခြားအတွေ့အကြုံများအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်လှပသောဒီဇိုင်းရှိပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည့်အက်ပလီကေးရှင်း ငါတို့ခရီးသွားရသောအွန်လိုင်းကမ္ဘာကြီးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ကမစမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးပါက၊ Periscope ၏မျက်စိကိုဖြတ်သန်းရန်အတွက်နှောင့်နှေးကြပါဘူး။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » လွှ » Periscope ကိုသိပြီးအသုံးပြုခြင်း၊ ခေတ်မှီသော real-time streaming ၀ န်ဆောင်မှု
ရောင်းဝယ်မှုနည်းဗျူဟာအသစ်များ။ OnePlus2ကို Ebay တွင်ပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက်လေလံတင်သည်